အလှအပ – Myanmar Live
လူနေမှုပုံစံ / အလှအပ
October 4, 2019 October 4, 2019 - by iampmy
၀က်ခြံတွေဟာမျက်နှာမှာတင်မကဘူး နောက်ကျောတွေအထိပါပေါက်နေတယ် မိန်းကလေးတွေဆိုပိုဆိုးတာ ပေါ့ မူရင်းမျက်နှာကိုတောင်မပြရဲလောက်အောင် အလှပြင်မယ်ဆိုရင်လည်း ၀က်ခြံတွေပိုဆိုးလာမှာကြောက်ရတယ် ဒါ့ကြောင့်အပြင်ကိုလည်းမသွားရဲ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်ဓာတ်ပုံရိုက်တင်မယ်ဆိုတော့လည်း မျက်နှာပြင်မကြည်လင်တာကြောင့် …
SOS ဟိုင်ယာလူရွန်စေရမ် အိမ်တိုင်းဆောင်ထားရမယ့်အိမ်သုံးစေရမ်!!!
September 12, 2019 September 12, 2019 - by iampmy
ဂုဏ်သတ္တိများပြားလှတဲ့စေရမ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဟိုင်ယာလူရွန်စေရမ်ရဲ့ ထရန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူတော်တော်များများကြားဖူးနားဝရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာရေပန်စားနေတဲ့ဒီစေရမ်ကိုဘရန်းအသီးသီးကသူတို့ရဲ့သုံးစွဲသူတွေအတွက် စေရမ်တွေစတင်ထုတ်လုပ်နေပြီး လေးလံတဲ့ခရင်မ်တွေနေရာကို အစားထိုးလာကြပါပြီ။ ဒါဆို ဟိုင်ယာလူရွန်စေရမ်ကရော ဈေးကွက်ထဲကစေရမ်တွေထက် …
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရောင်းအားအကောင်းဆုံး ဗိုင်တာရာ အလို ဗဲရာ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်
September 4, 2019 September 4, 2019 - by iampmy
လက်ရှိဟော့ဖြစ်နေတဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ် ထရိန်းဟာမပျောက်ကွယ်သေးတဲ့အပြင် အသိအမှတ်ပြုသူ များပြားလာတာနဲ့အမျှ သဘာဝသစ်ဥသစ်ဖုတွေကိုအသုံးပြုပြီးအလှကုန်အဖြစ်ထုတ်လုပ်လာတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအပြိုင် အဆိုင်ဖြစ်လို့လာပါတယ် ဒါပေမယ့် (Vitara …
Uncategorized / လူနေမှုပုံစံ / အလှအပ
Prettiface ပရောဒတ် ၃ မျိုးထဲကဘယ်အထုတ်ကိုသုံးသင့်သလဲ !
August 29, 2019 August 29, 2019 - by iampmy
ဈေးကြီးတဲ့အချို့စေရမ်တွေဟာစိတ်တိုင်းကျဖြစ်မလာနိုင်သလို နုနယ်တဲ့အသားအရေတွေနဲ့မတည့်တဲ့ပရောဒတ်တွေ လည်းဈေးကွက်မှာအများအပြားတွေ့ရတတ်ပါတယ် ဈေးကြီးတဲ့စေရမ်ကိုပိုင်ဆိုင်နေရပြီး အသားအရေနဲ့မတည့်တာ ကြောင့်စိတ်နာနာနဲ့စွန့်ပစ်လိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားချက်ကို ဈေးကြီးအလှကုန်ဝယ်သုံးဖူးသူတိုင်း ခံစားဖူးမှာပါ ဒါကြောင့်ငွေကုန်လူပန်းမဖြစ်ရလေအောင် Myanmar …
သုံးနေတဲ့ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်တွေတကယ် ကောင်းတယ်ဆိုတာသေချာလား ?
August 1, 2019 August 1, 2019 - by iampmy
သဘာဝမှထွက်တဲ့အရာတွေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေဟာယခုဆိုရင်အရမ်းကိုရေပန်းစားလို့နေပါတယ် ဒီထဲမှာမှအများဆုံးခေတ်စားလှတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ အသားအရေမွမ်းမံထိန်းတဲ့အလှ ကုန်တွေဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဝယ်ယူသုံးစွဲသူတွေအလိုက်သဘာဝမှထုတ်လုပ်တဲ့အလှကုန် ပစ္စည်းတွေကိုပြိုင်ဆိုင်ပြီးထုတ်လုပ်လာကြပါတယ် အကောင်းဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဒါဟာဝယ်ယူသုံးစွဲ သူတွေအတွက်ထုတ်ကုန်တွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း တဘက် …
ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ခရင်မ်အထုပ်၊ လစ်ပ်အထုပ်တွေ JuJune’ ကိုမယှဉ်နိုင်ဘူး
July 9, 2019 July 9, 2019 - by iampmy
ယခုအခါမှာ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို ကားခအကုန်ခံပြီးကုန်တိုက်ထိသွားဝယ်စရာ မလိုတော့ဘူးနော် သင့်အိမ်နီးနာက 7-11 နဲ့ CJ Express စတိုးဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူ …
June 12, 2019 June 12, 2019 - by arnakorn saengsiritrakun
စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့ “ယောင်္ကျားကောင်း” နဲ့ “ယောင်္ကျားလေး” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနှစ်လုံးကိုသိပြီးသားထင်ပါတယ် ဒီစကားလုံးနှစ်လုံးကိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ဆင်တူ တယ်လို့မှတ်ယူကြမယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ပါတယ် တကယ်တမ်းတော့ “ယောင်္ကျားကောင်း” …
လွယ်ကူတဲ့အသားရေဂရုစိုက်နည်း ၇ မျိုးနဲ့ မိုးရေကိုအံတုလိုက်ပါ
May 30, 2019 January 10, 2020 - by arnakorn saengsiritrakun
အခုလိုမိုးသည်းထန်တဲ့ရာသီမှာ ပျိုမေတော်တော်များများကမျက်နှာအသားရေကိုဂရုစိုက်ဖို့ မလိုဘူး ဆိုပြီးထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ် ဒီလိုတွေးရင်မှားသွားလိမ့်မယ်နော် မိုးရေထဲမှာပါလာတဲ့ အမှုန်တွေ ဟာ အသားရေကိုအလွယ်တကူပျက်စီးစေပါတယ် ဒါကြောင့် …